PressReader - Kwayedza: 2019-01-04 - Vatambi vengano
Gudo/Dede/Bveni/Mutiro — Iyi imhuka inowanikwa mungano zhinji kwazvo. Mungano dzakawanda Gudo rinoburitswa riri sekuru kuna Tsuro, uye richimiririra vanhu vakapusa (vasina njere), vasingafungi nevaye vanonyengedzwa nezvinhu zviri pachena. Gudo rinomiririra vanhu vane chimiro chakaipa sezvo richizivikanwa namahobi. Gudo rinomiririrazve vanhu vanoba, asi vasina njere zvinozoita kuti vapinde mumatambudziko.
Tsuro — aka kamhuka kadiki, asi kaine ungwaru, undyire uye unyengedzi. Mungano zhinji mhuka hombe dzinonyengedzwa naTsuro achishandisa njere dzake dzakapinza. Muupenyu Tsuro inomiririra vanhu vane mhumhu mudiki, asi vachigona kushandisa njere kuti vawane zvinhu zvinenge zvichishaikwa nevanhu vane mhumhu mukuru. Tsuro inoburitswawo ichimiririra vanhu vane utsinye muupenyu.
Shumba — mungano zhinji, Shumba ndiye aiva mambo wesango achitonga dzimwe mhuka dzose. Aikwanisa kuunganidza mhuka dzose dzesango kana pachinge paita dambudziko rakaita senzara achiona kuti vangakunda sei matambudziko aya. Muupenyu, Shumba anomirira umambo, uye chisimba chisina njere ndosaka dzimwe nguva achinyengedzwa naTsuro kana kupinzwa mumatambudziko nekuda kwekusafunga kunomutuma kushandisa chisimba. Pasichigare, madzishe aitonga akafuga dehwe reshumba zvinotsigira pfungwa yokuti shumba inomirira utongi mungano. Shumba inomirira vanhu vane unyanzvi hwekuvhima, vanotyisa, uye vane mhumhu mukuru.
Ngwena/Garwe — iyi imhuka inogara mumvura, asi ichida nyama zvikuru. Imhuka ine simba, uye inogona kubata hove. Inowanzodya icho chinenge chapinda mumvura ndosaka kune tsumo yokuti, “Garwe haridyi chebamba charo chinoza neronga.” Muupenyu garwe rinomirira vanhu vanokara, vane simba rakanyanya, uye vanongoda kudya zvinenge zvauya zvoga.
Mazita emhuka dzabuda pano dzichinzi vatambi anogona kuchinja zvichienderana nebhuku rengano dzaunenge uchiverenga. Tangokupai ruzivo urwu kuti mukwanise kuzotambanudza ongororo dzenyu muchienda kumberi. Dzimwe nguvawo munoona kuti nyangwe mungano mukave nemazita evanhu chaiwo mamwe acho anenge achienderana nezviito kana unhu hwevatambi ivavo. Naizvozvo pamunoongorora mazita evatambi dzamisai pfungwa kuti zvakambonyatsorerekera kupi.